Erotic Nepali Sex Story ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » Erotic Nepali Sex Story ब्वाईफ्रेन्ड को अगाडी सर सँग चिक्दा
सरले मोरी पुति चाट्दा साह्रै रमाइलो मान्छे, आज मजाले सफा गरिदिन्छु तिम्रो कुवा । यस्तो रमाइलो त मेरो स्वास्नी ले पनि गर्दैन । यस्तो रमाइलो मेरो घरको स्वास्नीले गर्ने भए म किन तँ का आउथेर ! वेला वेलामा पुतिवाट मुख निकाल्दै यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मेरो श्रीमान ले पनि यसरी मेरो पुति चाट्न दिने र लाडो चुस्न दिने भए त म किन यस्तो हुन्थें र ! भनेर मजा मानि मानि भन्दै थिएँ । तर मलाइ मेरो श्रीमान ले मेरो पुति नचाटेर वा मलाइ लाडो चुस्न नदिएर यस्तो चिकामारी गर्दै हिड्ने गरेको होइन । मलाई पहिलो पटक दुर्गा वहादुर सरले यो वानी लगाएकोले धेरै प्रकारको लाडो चाहार्ने वानी परेको हो । सर ले धेरै समय सम्म मेरो पुति अरु दिन भन्दा रमाइलो गरेर चाटिरहनु भयो, मेरो पुति ले धेरै पानी फाल्न थालेको थियो । यसपछि मैले सर को लाडो पनि चुस्न थालें, विस्तारै सर को लाडोले आफ्नो पुर्ण आकार लियो । त्यसपछि सरले मेरो हिलाम्य खेतरुपी पुति मा धानको विरुवा रुपी लाडो छिराएर लामो समय सम्म भित्र-वाहिर गर्नु भयो । वियर को नशाका कारण होकी साह्रै लामो समय लगाउनु भयो सरले । करिव ११ वजी सकेको थियो, सरको लाडोले हिलो माथी झन हिलो थप्यो, त्यसपछि सर मरो माथी नै लादो ननिकाली सुत्नु भयो । हामीले वेडमा सेक्स नगरि वियर खाएको सुरमा भुइमा नै चिकेको थियौं, मैले सरलाइ उठाएर माथी सुताउन सकिन र म पनि सर संगै केहिवेर पछि वत्ति निभाएर सुतें भुइमै । हामीले वत्तिवालेर नै चिकेका थियौं ।बत्ति वालेर सवै कार्य गरेको हुनाले विवेकले हाम्रो सवै चर्तिकला खाटमुनी वाट प्रष्ट देखि रहेको रहेछ । बत्ति निभाएको केहीवेरमै म निदाएछु । मलाइ थाहा भएन म कति वेला निदाएँ । निदाएको वेलामा फेरी मेरो पुतिमा, सायद हातको औलाले चलाइ रहेको जस्तो लाग्यो । नभन्दै हातले चलाइ रहेको थियो । वत्ति निभाएको ले केहि देखिदैन थियो मात्र सवै अनुभव वाट थाहा हुन्थ्यो । मैले सोचें सरलाइ फेरी चिकन मन लागेछ भन्ठाने । मैले पनि सर लाई सहयोग गरें । सर को लाडो मैले विस्तारै हातले चलाउन थाले ।
मैले जीवनमा यति धेरै लाडो समाइसकेको थिएँ की मलाइ लाडो को विभिन्न साइज/आकार नै एउटै जस्तो लाग्न थालेको थियो । मैले विस्तारै लाडो चलाउँदा चलाउँदा लाडो ठुलो ठुलो भैसकेको थियो । मेरो पालो हामी विपरित दिशामा अर्थात एक अर्काको मुखमा लाडो र पुति पर्ने गरि सुत्यौं र मैले लाडो चुस्न थाले । लाडो चुस्दै जाँदा विस्तारै सरको हल्का आवाज आउन थाल्यो । आवाज त फरक फरक जस्तो लागेको थियो तर मलाइ वियर लागेकोले यस्तो भान भएको होला भन्ने लाग्यो । विस्तारै विस्तारै मेरो पुति पनि चाट्न थाल्नुभयो सरले मलाई पहिला भन्दा झन रमाइलो लाग्न थाल्यो । लामो समय पुति सरले चाट्ने, मैले सरको लाडो चुस्ने गर्दा-गर्दै सरले मेरो मुखमा नै सवै माल झार्नुभयो । सर केहिवेर शिथिल हुनु भयो ।करिव १० मिनेट पछि फेरी सरले मेरो पुतिमा औला पसाउन थाल्नुभयो । मैलेपनि सरको लाडो समातेको त फेरी ठुलो भैसकेको रहेछ । सरलाइ त फेरी चिक्न मन लागेछ भन्ठानेर म फेरी उत्तानो परेर सुतेर, ल माथी चढनु भने । अघि चिकीसके पछि उठाउनै नसकेको सर खुरुक्कै माथी चढ्नु भयो र मेरो पुतिमा सजिलै आफ्नो लाडो छिराएर चिक्न थाल्नु भयो । म अचम्ममा परेको थिएँ, मलाइ सरको फुर्ति देखेर र चिकाइमा पनि फरक लागि रहेको थियो । सरको स्वर पनि फरक लागि रहेको थियो । केहि समय चिके पछि मेरो पुतिमै सवै माल झारेर सिथिल हुनु भयो र सर तल झरेर सुत्नु भयो । अव त मैले पनि साह्रै थाकेको महसुस गर्न थालेको थिएँ र म मज्जाले निदाएछु । Tweet
यसरी गर्छन् कलेज गर्लहरु रोमान्स	Mero Rape Vaeko Katha – Nepali Sex Story	दिपा भाउजु	About The Author